10 टेनिस क्षेत्रहरु संग शीर्ष गन्तव्यहरु | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 टेनिस क्षेत्रहरु संग शीर्ष गन्तव्यहरु
पेरिस मा प्रसिद्ध सडकहरु को छत मा, वा स्कटिश हाइल्याण्ड्स वा आल्प्स को बीचमा, यी यूरोप मा सबैभन्दा वांछित छुट्टी स्थानहरु छन्. यसबाहेक, यी 10 टेनिस क्षेत्रहरु संग शीर्ष गन्तव्यहरु पहिलो हवा बाट र एक नयाँ स्तर को लागी तपाइँको खेल मा ऊर्जावान हुनेछ. एक्लो वा जोडीहरू, तपाइँ यी आश्चर्यजनक ठाउँहरु र उनीहरुको टेनिस कोर्ट लाई माया गर्नुहुनेछ.
1. ग्रेट टेनिस क्षेत्र संग फ्रान्स मा सर्वश्रेष्ठ गन्तव्य: Mouratoglou टेनिस एकेडेमी
फ्रेन्च रिवेरा फ्रान्स मा शीर्ष छुट्टी गन्तव्यहरु मध्ये एक हो, युरोप छोड्नुहोस्. अल्पाइन पहाड दृश्य, नीलो झीलहरु, र बलौटे समुद्र तटहरु, Mouratoglou टेनिस क्षेत्र बाट मात्र केहि कदम टाढा. Ionian सागर देखी, यो अत्याधुनिक टेनिस कोर्ट यूरोप मा केहि शीर्ष टेनिस प्रशिक्षकहरु संग तपाइँको ब्याकह्यान्ड अभ्यास गर्न को लागी एक अद्भुत ठाउँ हो.
Mouratoglou टेनिस एकेडेमी सबै स्तर मा खेलाडीहरु को सबै प्रकार को स्वागत गर्दछ. Mouratoglou टेनिस कोर्ट हरेक दिन खुला छन्. होटल मा तपाइँको बसाई को समयमा & रिसोर्टमा, तपाइँ प्रति दिन एक घण्टा को एक अदालत बुक गर्न सक्नुहुन्छ. अद्भुत Mouratoglou टेनिस कोर्ट विश्व प्रसिद्ध को हिस्सा हो Mouratoglou एकेडेमी र विश्व मा सबै भन्दा राम्रो टेनिस खेलाडीहरु को यहाँ अभ्यास र आराम र unwinding को लागी होटल को स्पा वा समुद्र तट जारी थियो।.
2. टेनिस कोर्ट संग इटाली मा अद्भुत छुट्टी गन्तव्य: सान पिएट्रो डि Positano
यो महान टेनिस कोर्ट Il सैन Pietro होटल अतिथिहरु को लागी विशेष छ. Positano5तारा टेनिस कोर्ट भूमध्य सागर र भव्य Amalfi तट प्रदान गर्दछ. सैन Pietro टेनिस कोर्ट Positano मा छ, को को एक 10 सबैभन्दा आश्चर्यजनक गन्तव्य Amalfi तट मा भ्रमण गर्न, र पक्कै इटाली.
Amalfi को यात्रा सबैको सपना हो. समुद्र तट, को सुरम्य गाउँहरु, समुन्द्री जीवन, र पोस्टकार्ड दृश्य खेल र टेनिस को लागी महान आउटडोर मैदान संग प्रशंसा, के कसैले धेरै सोध्न सक्छ?? यदि तपाइँ तपाइँको खेल को अभ्यास को थकित हुन्छ, तपाईं कंकड़ समुद्र तट तल जान सक्नुहुन्छ, वा एक विशेष मा जानुहोस् डुङ्गा सवारी लुकाउने Positano संगै.
3. टीउनी इंग्ल्याण्डको सर्वश्रेष्ठ टेनिस क्षेत्र हुन्: हेडल्याण्ड, कर्नवाल
रकी कोभ्स, बलौटे तटहरू, नीलो अटलांटिक महासागर, र हरियो मूरल्याण्ड मा अंग्रेजी कॉटेज, Cornwall इ England्गल्याण्ड को सबैभन्दा रमणीय छुट्टी गन्तव्यहरु मध्ये एक हो. आश्चर्यजनक प्रायद्वीप समुद्र तट मा विश्राम को लागी एकदम सही छ, र महान बाहिरी गतिविधिहरु, टेनिस वा पानी खेल जस्तै.
कर्नवाल मा, बाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ4टेनिस कोर्ट एक महान खेल खेल्न को लागी. उदाहरणका लागि, Penzance टेनिस क्लब सबै आगन्तुकहरु र सबै स्तर मा खेलाडीहरु को लागी खुला छ. तथापि, सबै भन्दा राम्रो टेनिस कोर्ट Newquay मा हेडल्याण्ड होटल मा छ. Fistral समुद्र तट र अटलांटिक महासागर देखी, हेडल्याण्ड एक शानदार होटल हो, महान बाहिरी सुविधाहरु संग अद्भुत अंग्रेजी समुद्री किनार मा तपाइँको छुट्टी मा सक्रिय रहन को लागी.
4. स्विट्जरल्याण्ड मा शीर्ष टेनिस छुट्टी गन्तव्य: Gstaad दरबार
धेरै पर्यटकहरु Gstaad शहर एक जाडो वन्डरल्याण्ड को रूप मा जान्न सक्छन्, तर यो पनी एक ग्रीष्मकालीन परी कथा हो. को स्विस आल्प्स वसन्त मा आश्चर्यजनक छन्, पैदल यात्रा को लागी महान मौसम को स्थिति संग, साइकलको, र एक टेनिस खेल. Gstaad स्विट्जरल्याण्ड मा एक सक्रिय छुट्टी को लागी एक अद्भुत गन्तव्य हो, exuberating दृश्यहरु र प्रकृति मा ताजा अल्पाइन हावा कि तपाइँको ऊर्जा को स्तर लाई बढावा दिनेछ.
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, Gstaad स्विस आल्प्स मा एक टेनिस छुट्टी को लागी एक शीर्ष गन्तव्य हो. Gstaad पैलेस रिसोर्ट होटल मा स्विस ओपन जे को5सितारा टेनिस कोर्ट बाट. Safra Sarasin टेनिस क्षेत्र, र Gstaad क्लब खेल केन्द्र, छनौट तपाइँ मा निर्भर छ, अल्पाइन दृश्यहरु प्रत्येक एकल अदालत मा पर्खन को लागी दुनिया मा केहि सर्वश्रेष्ठ टेनिस खेलाडीहरु संग तपाइँको चाल को अभ्यास गर्न को लागी हुनेछ.
5. ताल मा टेनिस खेल्नुहोस् जेनेभा, स्विट्जरल्याण्ड
निर्मल, हरियो र नीलो, लुभावनी प्राकृतिक सौन्दर्य, लेक जेनेभा एक जादुई छुट्टी गन्तव्य हो. पृष्ठभूमि मा अल्पाइन परिदृश्य आगन्तुकहरु सबै वर्ष दौर आकर्षित गर्दछ, एक महान स्की सप्ताहांत को लागी, वा आराम वसन्त छुट्टी. यहाँ, तपाइँ अल्पाइन घाँस मा पैदल यात्रा वा ताल द्वारा आराम बाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, सक्रिय वा चिसो रहन बाट, या त बाटो, तपाइँ छनौट गर्नुहुन्छ तपाइँ स्वस्थ र ऊर्जावान महसुस गर्नुहुन्छ.
लेक जेनेभा बाहिरी रमाईलो को लागी आदर्श गन्तव्य हो, टेनिस कोर्टहरु यहाँ आकर्षण को लागी जोड्छन् र विश्व भर बाट टेनिस खेलाडीहरु लाई आकर्षित गर्दछ. यहाँ होटल र रिसोर्ट्स अद्भुत टेनिस कोर्ट प्रदान गर्दछ, र सप्ताहन्तमा पनी एक एकल वा जोडीहरु को आनन्द उठाउन सक्छन्’ लेक जेनेभा मा एक टेनिस क्लब मा मिलान. यो स्विस मणि सबै स्तर मा र हरेक बजेट को लागी खेलाडीहरुलाई स्वागत गर्दछ.
लियोन एक ट्रेन संग जिनेभा
एक ट्रेन संग जिनेभा को ज्यूरिख
पेरिस को जिनेभा एक ट्रेन संग
बर्न एक ट्रेन संग जिनेभा
6. टेनिस क्षेत्रहरु संग शीर्ष गन्तव्यहरु: पेरिस मा टेनिस छुट्टी
थोरै मात्र तपाइँलाई थाहा थियो कि संसारको ठाडो र रोमान्टिक राजधानी यूरोपको सबैभन्दा राम्रो राखिएको टेनिस कोर्ट छ. यी स्थानहरु मध्ये एक 12th arrondissement मा लुकेको छ, पेरिस’ केन्द्रीय टेनिस क्लब. क्लब पुरानो पेरिसियन सडक मा लुकेको छ, यो आधुनिक टेनिस कोर्ट एक स्थिर बाट एक महान टेनिस कोर्ट मा बदलियो. यदि तपाइँलाई पत्याउन गाह्रो छ भने आउनुहोस् आफैंलाई हेर्नुहोस्, यो टेनिस क्लब सबै को लागी खुला छ.
सबैले पेरिस आउने सपना देखे पछि, र धेरै पेरिस यात्रा वा स्थायी रूपमा सार्ने को आफ्नो जीवन लामो सपना पूरा, शहर धेरै भीडभाड छ. तेसैले यो कुनै आश्चर्य को कुरा छैन कि पेरिस मा केहि सबैभन्दा प्रसिद्ध प्रतिष्ठानहरु को छत मा सार्छन्. यो टेनिस कोर्ट को मामला हो, जबकि धेरै देशहरुमा यी बाहिरी क्षेत्रहरु हुन्, पेरिसमा, तपाइँ तपाइँको चाल को अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ एक रेलवे स्टेशन को शीर्ष, एट्लान्टिक गार्डन मा, भ्रमण Montparnasse को दृश्य संग.
7. Pikes होटल Ibiza मा टेनिस खेल्नुहोस्
स्पेनिश टापु प्रसिद्ध पार्टीहरु को लागी प्रसिद्ध धन्यवाद छ, लक्जरी होटल, र समुद्र तट. तपाइँ जान्न को लागी आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि इबिजा को केहि छ सबैभन्दा लुकाउने दृश्य स्पेनमा. चट्टानी टापु, सुनौलो समुद्र तटहरु, र प्राचीन समुद्र एक छवि बनाउँछ कि सबैलाई सबै रात नृत्य को बारे मा बिर्सन्छ. सट्टा, उनीहरु घाम संगै उठ्छन्, Ibiza मा अर्को महान दिन स्वागत छ.
यसबाहेक, स्पेनिश टापु को महान आउटडोर टापु एक सक्रिय छुट्टी को लागी एक आदर्श गन्तव्य बनाउँछ. होटलहरु महान खेल सुविधाहरु प्रदान गर्दछ, शानदार टेनिस कोर्ट जस्तै. एक एकल टेनिस खेल को लागी सबै भन्दा राम्रो ठाउँहरु मध्ये एक पाइक्स होटल को गुलाबी कोर्ट हो. यो रमाईलो टेनिस कोर्ट चारैतिर हरियो पहाडहरु र माथि नीलो आकाश संग समुद्र को नजरअन्दाज गर्दछ. एकल को लागी बिल्कुल सही, वा दोब्बर, यदि तपाइँ एक टेनिस उत्साही हुनुहुन्छ, तब Ibiza मा Pikes एक जरूरी छ.
8. Tenuta Delle Ripalte एल्बा टापु, टस्क्यानी
एल्बा टापु मा धेरै थोरै छुट्टी आवास एक टेनिस कोर्ट छैन. Tuscany मा एल्बा टापु समुद्र द्वारा छ, दाखबारी ट्रेल्स र इटालियन भिल्ला बन्द, तर सपना जस्तै. एल्बा टापु यूरोप मा शीर्ष snorkeling गन्तव्यहरु मध्ये एक हो, र तपाइँ सहमत हुनुहुनेछ एक पटक तपाइँ तल जानुहोस् र पहिले पनि, जबकि इटाली मा सबै भन्दा ठूलो द्वीपसमूह को प्रशंसा.
त्यसैले, एल्बा टापु एक शानदार आउटडोर छुट्टी गन्तव्य हो. समुद्र तट रमाईलो मा जोड्दै, तपाइँ एकल खेल्न वा शीर्ष रिसोर्ट्स को एक मा तपाइँको शक्ति जोडा लाभ चमक गर्न सक्छ’ टेनिस कोर्ट. माथि उल्लेख गरिए अनुसार, एल्बा मा हरेक छुट्टी आवास निजी टेनिस कोर्ट प्रदान गर्दछ, पौडी खेल्ने पोखरी, वा निजी समुद्र तटहरु. जब तपाइँ अदालत बाट समुद्र मा एक कदम मा उफ्रन सक्नुहुन्छ, तपाईं राम्रो जीवन बिताइरहनुभएको छ, निश्चित रूपमा.
9. टेनिस क्षेत्रहरु संग शीर्ष गन्तव्यहरु: स्कटल्याण्ड मा टेनिस छुट्टी
महल, कुटीरहरु, चट्टान र हाइल्याण्ड्स को स्कटिश प्रकृति, स्कटल्याण्ड को यात्रा नाइट्स र किंवदन्ती को समय मा फिर्ता जाँदैछ. जबकि thechached कॉटेज र भव्य महल भित्र समय द्वारा अछूता छन्, महान हरियो बाहिर पूरै आज यात्रुहरु लाई समायोजित. पौंडी पोखरी देखि टेनिस क्षेत्रहरु सम्म, हरेक विवरण आगन्तुकहरु सबै उनीहरु घर बाट टाढा प्रदान गर्न को लागी डिजाइन गरीएको हो.
त्यसैले, यदि तपाइँ टेनिस को एक खेल मनपर्छ, वा भव्य ग्रामीण इलाका दृश्यहरु सम्म पैदल यात्रा, स्कटल्याण्ड एक अद्भुत गन्तव्य हो. शब्दहरु स्कटल्याण्ड मा एक छुट्टी को अनुभव लाई पुरा तरिकाले व्यक्त गर्दैन जब सम्म तपाइँ आफ्नो लागी सुन्दरता देख्नुहुन्छ. जब तपाइँ यस्तो प्राकृतिक महिमा मा हुनुहुन्छ, तपाइँ बाहिरी रमाईलो र विश्राम को हरेक मिनेट खजाना हुनेछ.
10. टेनिस छुट्टी मा साल्ज़कामेरगुट अस्ट्रिया
तपाइँ ताल द्वारा कविता लेख्न सक्नुहुन्छ, सूर्यास्त हेर्दै, Strudel संग. अर्कोतर्फ, तपाइँ साल्जबर्ग मा गौरवशाली झील Wolfgang को लागी Schafberg माउन्टेन ट्रेन लिन सक्नुहुन्छ. साल्जबर्ग ताल क्षेत्र उल्लेखनीय सुन्दर र प्रकृति मा एक महान छुट्टी गन्तव्य हो. ताल दृश्य, अल्पाइन चरन भूमि, सेन्ट गिल्जेन र सेन्ट वोल्फग्या between्ग बीच तीर्थयात्रा पैदल यात्रा मार्ग भयानक तरीकाहरु तपाइँको शक्ति कायाकल्प गर्न को लागी हो.
जबकि धेरै आगन्तुकहरु वोल्फगैang ताल आराम गर्न आउँछन्, यो वास्तव मा एक अद्भुत सक्रिय छुट्टी गन्तव्य हो. महान पदयात्रा बाहेक, तपाइँ गर्न सक्नुहुन्छ, अस्ट्रिया क्षेत्र टेनिस प्रेमीहरु को लागी अद्भुत छ. Salzkammergut मा होटल अल्पाइन र ताल दृश्य संग अद्भुत टेनिस कोर्ट छ. त्यसैले, यदि तपाइँको लामो जीवन सपना अस्ट्रिया मा एक टेनिस छुट्टी हो, Salzkammergut सबै भन्दा राम्रो स्थान हो.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई एक महान सक्रिय छुट्टी को योजना मा मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं. यी 10 शीर्ष गन्तव्यहरु महान दृश्यहरु र अद्भुत टेनिस क्षेत्रहरु छन्. त्यसैले, तपाइँ तपाइँको एकल खेल वा तपाइँको साथीहरु को बिरुद्ध एक मैच मा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँको सुन्दर छुट्टी मा रमाईलो यादहरु सिर्जना गर्दै.
के तपाइँ तपाइँको ब्लग पोस्ट "टेनिस क्षेत्रहरु संग १० शीर्ष गन्तव्यहरु" तपाइँको साइट मा एम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fen%2Ftop-destinations-tennis-fields%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
सर्वश्रेष्ठ टेनिस रिक्तिहरू playtennisineurope टेनिस टेनिस कोर्ट टेनिस फिल्डहरू टेनिस अवकाश गन्तव्यहरू शीर्ष गन्तव्यहरू सहित टेनिसफिल्डहरू